Kuuriyada Waqooyi oo sheegtay in ay hub cusub tijaabisay - BBC News Somali
Arrintan ayaa noqonaysa markii koobaad ee si rasmi ah loo shaaciyo gantaal la tijaabiyay tan iyo markii uu is afgarad la'aan ku dhammaaday wadahadalkii ay yeesheen hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo hoggaamiyaha Maraykanka Donald Trump.
Daawo duqaymaha ay Israa'iil ka gaysatay Qaza
Toddobaadkii hore Kim wuxuu sheegay in Trump looga baahan yahay in uu "wanaajiyo qaabka uu arrinta u wajahayo" si ay wadahadalladu u sii socdaan, ka dib markii uu isfaham la'aan ku soo dhamaaday shirkii ay bishii Feebaraayo yeesheen.
Hubkan ayaa ahaa "nooc gaar ah oo la hagi karo" sida ay ku warrantay KCNA, waxayna intaas ku sii dartay in tijaabadan "lagu sameeyay noocyo kala duwan oo lagu beegsanayo bartilmaameedyo kala duwan".
Kim wuxuu sheegay in horumarkani uu yahay "mid miisaan u soo kordhinaya awoodda difaaca ciidanka umadda".
Faahfaahin kale lagama bixin, oo xataa lama sheegin in uu gantaal ahaa.
Sannadkii horana hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in uu dalkiisu joojinayo tijaabinta gantaallada qaaradaha isaga kala goosha, maadaama oo la "hubiyay" awooda nukliyeerka ee Pyongyang.